प्रचण्डलाई चितवनमा अब चुनाव लड्ने आँट नै आउँदैन: नेता सापकोटा - Narayanionline.com
हरि सापकोटा चितवनको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिरपरिचित नाम हो । विसं २०१८ असोज १७ गते पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा जन्मिएका सापकोटा १० वर्षको हुँदा २०२८ सालमा परिवारसहित चितवन बसाइँ झरे । भरतपुर महानगरपालिका–६ केशरबागमा स्थायीरुपमा बस्न थालेका सापकोटा अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय गीतानगरमा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरबाटै कोअर्डिनेसन केन्द्रमार्फत् कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गरे ।
कम्युनिस्ट नेता नरबहादुर खाँडबाट प्रभावित भएर सुरुमा स्टुडेण्ट रेडगार्ड दलबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सापकोटा २०३८ सालमा नेकपा मालेमा आवद्ध बने । भूमिगत कालमा सापकोटा पूर्वी चितवनको भण्डारा, पिप्लेदेखि महाकालीको दार्चुलासम्म पार्टीको संगठन विस्तारमा पुगे । केहीसमय जेल जीवन पनि बिताएका सापकोटा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा महाकाली अञ्चल संगठन कमिटीको उपसचिव हुँदै कपिलवस्तुमा पार्टी सचिवको जिम्मेवारी निभाए । २०४९ सालमा नेकपा एमालेको नारायणी अञ्चल कमिटी सदस्य, विसं २०५४ सालदेखि २०५८ सालसम्म एमालेको जिल्ला सचिव भएर काम गरे । त्यसैगरी २०६५ सालको बुटवल महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सचिवमा उनी नियुक्त भए । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सापकोटालाई चितवनको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनायो । सोही समय उनले चितवनमा एक हजार ४४९ पुर्जा सुकुमबासीलाई बाँड्न सफल भए । झण्डै पाँच दशकदेखि कुनै लाभको पद नलिई निरन्तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका सरल जीवनशैलीका उदाहरणीय व्यक्तित्व सापकोटालाई हालसालै ओली पक्षले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ । देशको बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाबारे नेता सापकोटासँग नारायणी अनलाइनले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
प्रश्न : त्यो बेलाको कम्युनिस्ट राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा के अन्तर छ ?
आकाश जमिनको फरक छ । तत्कालिन समयमा कम्युनिस्ट नेताहरुको फरक पहिचान रहेको थियो भने जीवनशैली पनि अहिलेको भन्दा धेरै फरक थियो । अहिले कम्युनिस्ट दलका नेताहरु र अन्य दलका नेताहरुको जीवनशैली र व्यवहार उस्तै उस्तै देखिन्छ ।
प्रश्न : कम्युनिस्ट नेताहरुको बानीव्यवहार र जीवनशैली अन्य दलका नेताहरुको भन्दा पृथक हुन नसक्नुको कारण के होला ?
सिंगो देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो राजनीति र राजनीतिक संरचनाहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन् । संक्रमणकालमा संसारभर नै यस्ता चरित्र देखिने गर्छन् । नेतृत्वले आफ्नो आम कार्यकर्ता र समर्थकलाई अनुशासनमा नराख्दा समस्या आएको हो । नेतृत्व नै भीडको पछाडि कुद्न थालेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अनेकखाले व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुने दृश्य र अदृश्य होडले नै समाजमा विकृति बढिरहेको छ ।
प्रश्न : अहिले देशको ठूलो पार्टी नेकपाभित्र विकसित घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यो घटना नेकपाभित्रको राजनीतिक बिचलनको परिणाम हो । एकैचोटी सबैलाई अवसर चाहिने भएकोले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रवादी अडानका कारणले एउटा ब्राण्डको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित हुनु भएको थियो । सारा जनमत मुख्य त उहाँको कारणले आएको भन्नेमा अन्य नेताहरु स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । जनताको बीचमा स्थिर सरकारको नारा दिएर बनेको सरकार केही व्यक्तिहरुको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रहर नपुगेका कारणले सरकारलाई काम गर्न नै दिइएन । सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नै पाएन । प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोज्ने, राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाइ हटाउन खोज्ने जस्तो षडयन्त्रहरु थाहा पाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको ताजा जनादेश लिने भनेर संसद विघटन गर्नु भएको हो ।
यो विभाजन भन्ने कुरा परिवारदेखि सुरु गरौं । परिवारमा पनि विभाजन भयो भने हामीलाई नराम्रो लाग्छ । सामाजिक संघसंस्थामा पनि विभाजन भन्ने कुरा नराम्रो लाग्छ, अप्रिय नै लाग्छ । यति ठूलो पार्टी दुई तिहाइ बहुमतको पार्टी विभाजन हुनु पक्कै पनि नराम्रो कुरा हो पीडादायी नै कुरा हो । नहुनुपर्दथ्यो, अहिले पनि औपचारिकरुपमा विभाजन भएको छैन । एकदमै निकट पुगेको छ । अलगअलग भेला बैठक राख्ने काम भइरहेको छ । यसले म एकदमै दुःखी छु । जुन परिवेश बन्यो । परिवेश निर्माण गर्ने जुन नेताहरु छन् उनीहरुको कारणले यस्तो हुन गयो ।
प्रश्न : फुटको परिस्थिति निर्माण हुनुमा को दोषी हो जस्तो लाग्छ ?
दोषको मात्रा कम र बेसी जरुर छ । धेरै लामो अन्तर संघर्ष भयो । अन्तिममा विभाजनको कारण चाही कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका कमरेड पुष्पकमल दाहालले जुन लिखित आरोपपत्र तयार गरेर आरोप लगाउनु भयो । पार्टी भित्र पार्टीको लोगो राखेर वितरण पनि गर्नुभयो । त्यो प्रमुख कारण बन्यो । प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा प्रतिवाद पनि गर्नुभयो । आरोपको जवाफ पनि दिनुभयो । अन्तिममा पार्टी एकताका लागि दुवै आरोप पत्र फिर्ता लिने पनि कुरा भयो तर कमरेड प्रचण्डले अस्विकार गरेको कारणले अहिले पार्टी फुटको दिशामा गइरहेको छ । कारण त्यही नै हो ।
प्रश्न : कार्यकर्ताको भावना, इच्छा, आकांक्षा के छ ? आम नागरिकलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ।
केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीले मलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेपछि हामीले छलफल भेला, बैठक चलाइरहेका छौं । कमरेड मदन भण्डारी र बहुदलीय जनवादको बेला नेपालको सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनले सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेको अवधि हो । हामीलाई सजिलो र हामीले कार्यकर्तालाई बुझाउनु पर्ने कुरा के हो भने कमरेड मदन भण्डारीको लिगेसी हामीसँग छ । कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वको निरन्तरताको रुपमा कमरेड केपी ओली देशभक्त नेता, विकास प्रेमी नेता हामीसँग हुनुहुन्छ । हामीले देखि पनि रहेका छौं । जनमत र कार्यकर्ताको संख्या यतातिर नै बढी ढल्किरहेको र बढी आकर्षित भएको छ ।
प्रश्न : तपाइँले यसो भनिरहँदा झलनाथ खनाललगायत थुप्रै शीर्ष नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
त्यो टाउको एकातिर आधार वा बेस अर्काेतिर । टाउकोको हिसाबले तपाइँले भनेको कुरा ठिक हो । उहाँहरु त्यता देखिनु भएको छ । तर, उहाँहरुको पछाडि जनमत छैन । जनमत त केपी ओली नेतृत्व वाला पार्टीको पक्षमा देखिरहेका छौं । पुस २० गते मात्र पनि हामीले चितवनमा भेला ग¥यौं । संयोगवश उहाँहरुले पनि सोही दिन भेलाको आयोजना गर्नुभयो । दुई भेलाको मानिसले तुलना गरे । मिडियाहरुले पनि तुलना गरे । प्रचण्ड र महासचिव सुरेन्द्र पाण्डेकै जिल्लामा उहाँहरुको पक्षमा भेलाको उपस्थिति र हाम्रो पक्षमा भेलाको उपस्थिति त्यो दाँज्नै सकिँदैन । तुलना नै हुन सक्दैन । कताकता हामीतिरको प्रभाव चाही एकदमै यस्तो उत्साहित खालको थियो । हामीले सेलेक्टेड कार्यकर्तामात्र उपस्थिति गराउँदा पनि आयोजना गरेको हल साघुँरो भयो । खचाखच थियो नेता कार्यकर्ता दुवैमा अत्यन्त राम्रो उत्साह थियो भने उतातिर कुण्ठा र चिम्रिएको अनुहार देखिरहेका छौं । यसले नै संकेत गर्छ हामी कता जाँदैछौं ।
प्रश्न : यहाँले पूर्व एमालेका जो कार्यकर्ताहरु थिए ती हामीसँग छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यो त हुँदै हो । ती त छँदै छन् । साथै अब मानिसहरुलाई परिवर्तन चाहिएको छ । एजेण्डा चाहिएको छ, जीवनमा सुख चाहिएको छ । मानिसहरुलाई अनुहार चाहिएको छैन । हामीसँग एजेण्डा छ, बुहदलिय जनवाद छ । नेतृत्व छ । त्यतैबाट हुन्छ भन्ने आशा भरोसा कार्यकर्तामा छ । अरु पंक्ति पनि हामीतिर फर्किएर आउँछ । परिवर्तन चाहने पंक्ति एतैतिर आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
प्रश्न : यदि संसद पुर्नस्थापना भयो भने । सूर्य चिन्ह अर्काे पक्षमा गयो भने अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूह जसरी सडकमा जानु परेको छ । त्यसरी नै सडकमा झर्ने दिन आउँछ भनेर अर्काे पक्षले आरोप लगाइरहेको छ नि ?
आरोप त जे पनि लगाउन सकिन्छ तर त्यसको कुनै आधार छैन । पहिलो कुरा संसद पुर्नस्थापना हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ । दोस्रो कुरा निर्वाचन चिन्ह हामीसँगै रहन्छ । हामीसँग त्यसको आधारहरु छन् । निर्वाचन चिन्ह प्राविधिक कुरा हो । मुख्य कुरा भनेको एजेण्डा हो । विषयवस्तु हो । विषयवस्तु हामीतिर भएको हुनाले त्यसले खासै असर पार्देन भन्ने मलाई विश्वास छ ।
प्रश्न : चितवन प्रचण्डको जिल्ला र सुरेन्द्र पाण्डेको गृह जिल्लाको रुपमा पनि परिचित छ । यहाँ ओली निकट समूह कमजोर हो भन्ने गरिएको छ । तपाइँहरुको उपस्थिति कस्तो हो चितवनमा ?
चितवनमा यस्तो कालखण्ड रह्यो । नवौं जिल्ला अधिवेशनमा नहुनुपर्ने दुर्भाग्य भयो । त्यतिखेर मिलाएर नै लिएर जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यो हुन सकेन । कमिटीगत हिसाबले एउटा पक्ष बलियो देखियो । तर, त्यो जनमत होइन । कमिटीगत हिसाबले मिलाएर ल्याएका प्रतिनिधिका कारणले त्यस्तो देखिन पुग्यो । माओवादी केन्द्रसँग एकता भइसकेपछि पछिल्लो चरण त्यो दुईवटा पक्ष पूर्वएमालेको माधव नेपाल पक्षधरका साथीहरु र प्रचण्ड पक्षका साथीहरु हेर्दा त्यस्तो देखियो । अब के भयो भने मानिसले त विश्लेषण गर्छन् । विश्लेषण गरेर कता ठीक भनेर छुट्याउँछन् । विस्तारै यतातिरको माहोल बलियो हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाम्रो आत्मविश्वास छ कि चितवन चाही हाम्रो पक्षमा धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो परिस्थिति हाम्रो पक्षमा राम्रो हुँदै गइसकेपछि कमरेड प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र फेर्नुहुन्छ ।
प्रश्न : अब प्रचण्डलाई चितवन–३ मा निर्वाचन लड्ने आँट आउँदैन ?
आँट नआउने स्थिति बन्दै गइरहेको छ । अझ बन्छ । जनमत उहाँको पक्षमा हुँदैन । कार्यकर्ता शक्ति पनि यता आउँछ । त्यसपछि उहाँले आशा नदेखेपछि निर्वाचन क्षेत्र फेर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
प्रश्न : सबिकको एमालेकै जनमतको आधारमा उहाँले चुनाव जित्नु भएको हो ?
त्यो त भनिरहनु नै परेन । हामी पूर्व एमाले सबै नलागेको भए उहाँले त जित्ने आधार नै थिएन । त्यो त जगजाहेर नै कुरा हो ।
प्रश्न : आगामी दिनहरुमा फुटको संघारमा रहेका दुई पक्षहरुबीच फेरि एकीकरण हुने र पुरानै ठाउँमा आउने सम्भावना तपाइँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न ?
इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न समूह मिलेर नेकपा एमाले बनेको थियो भने अर्काेतिर धेरै विभाजित समूहहरु जम्मा भएर जुट्दै आएर नै माओवादी केन्द्र बनेको थियो । ती दुईवटै मिलेर अझ राम्रो स्थिति आएको थियो । अहिले विभाजन भएको छ । जे जस्ता कमजोरीहरु जोजसले गरे । सबै महसुस गरेर हामीले ठूलै गल्ती गरिएछ भनेर ती गल्तीहरुप्रति पश्चाताप गर्दै आउने दिनमा इतिहासको अर्काे कालखण्डमा त एकता हुन पनि सक्छ । अहिले तत्कालै त त्यो सम्भावना एकदम कम देखिएको छ । जनमत त एकताकै पक्षमा देखिन्छ । नेताहरुको कमजोरीका कारणले नेताहरुको निजी लाभ र अपेक्षाको कारणले विभाजन हुन पुग्यो । त्यो चिजलाई सच्याएर जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित भएर जानुपर्छ । कतिपय कुरा त्याग गर्नुपर्छ पालो कुर्न सक्नुपर्छ । सिस्टमबाट जानुपर्छ भन्ने कुरामा साथीहरु आउनु भयो भने त एकता हुन सक्छ ।
प्रश्न : कार्यकर्ताहरुमा पनि निराशा आइरहेको छ । कार्यकर्ताहरुलाई तपाइँ एउटा पुरानो कम्युनिस्ट नेताको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ ?
क्रान्ति, परिवर्तन, राजनीतिक पार्टी, पार्टीको अस्तित्व पार्टीको आवश्यकता भनेको सामाजिक आवश्यकता हो । समाजमा जबसम्म वर्गहरु रहन्छन् । वर्गहरु भन्नुको अर्थ हुदा खाने र हुने खाने को बीचको अन्तर रहिरहन्छ । त्यो बेलासम्म क्रान्तिको आवश्यकता रहन्छ । क्रान्तिको आवश्यकता रहँदा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्रान्ति परिचालन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता रहन्छ । त्यो हाम्रो समाजमा मौजुद छ । हाम्रो समाज वर्ग विभाजित समाज हो । सानो तप्का हुने खानेमा छ । मोजमस्तीमा छ । ठूलो तप्का हुदा मात्र खाने अवस्थामा छ । यो चिज रहँदासम्म कम्युनिस्ट विचारको कम्युनिस्ट अन्दोलनको आवश्यकता रहन्छ । त्यो बनाएर लिएर जानुपर्छ यी विचारहरु हामीले जनता कार्यकर्तालाई सम्झाउँछौं । आशा जगाएर नै अगाडि जान्छौं । त्यसमा हाम्रो विश्वास छ । त्यही कुरामा लाग्नुपर्छ । सबै समर्थक, शुभचिन्तकहरुमा यही अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
आजैदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
एमाले केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै, नेपाल समूह सहभागी नहुने
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकारको सम्भावना छैनः देउवा
भारतीय मिडियाको भ्रामक समाचारको कुटनीतिक खण्डन गर्न फोनिजको माग
दाङमा कोरोनाबारे अफवाह फैलाउने पक्राउ
नारायणगढमा ४० जनाले गरे रक्तदान